(FILES) This file photo taken on October 16, 2014 shows French designer Pierre Cardin posing on October 16, 2014 at the Espace Pierre Cardin in Paris. – French fashion designer Pierre Cardin, hailed for his visionary creations but also for bringing stylish clothes to the masses, died on December 29, 2020 aged 98, his family told AFP. Cardin who was born in Italy in 1922 but emigrated to France asasmall child, died inahospital in Neuilly in the west of Paris, his family said. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
ပြင်သစ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Pierre Cardin သည် သူ၏အမြော်အမြင်ရှိရှိ ဖန်တီးမှုများအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည့်အပြင် ခေတ်မီအဝတ်အထည်များကို လူအများထံ ယူဆောင်လာသည့်အတွက်လည်း ဂုဏ်ပြုခံခဲ့သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် သူ၏မိသားစုမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Cardin သည် အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိ ၀င်ငွေနည်းသော မိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သော်လည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် ဖက်ရှင်စူပါစတားဖြစ်လာပြီး သူသည်ပဲရစ်၏အနောက်ဘက် Neuilly ရှိ ဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိ ဗင်းနစ်စ်အနီးတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ၏မိသားစုသည် သူငယ်စဉ်အခါက ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့သည်။
သူသည် ပြင်သစ်စက်မှုမြို့တော် Saint-Etienne တွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အသက် ၁၇ နှစ်တွင် Vichy ရှိ အပ်ချုပ်နှင့်အမျိုးသမီးဝတ်စုံအထူးပြုကို သင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ပဲရစ်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်ကဗျာ၊ အနုပညာရှင်နှင့် ဒါရိုက်တာဂျင်းကော့တိုနှင့်အတူ Beauty and the Beast ရုပ်ရှင်အတွက် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စုံတွဲများနှင့် ဝတ်စုံများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
သူ၏မိသားစုသည် အချိန်တိုအတွင်းတွင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကမ္ဘာကျော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် ချီးကျူးဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် အသုံးပြုပြီးသား နာမည်ကြီးသည့် Cardin အမှတ်တံဆိပ်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ၀တ်ဆင်မှုပြသခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် သူသည်ရောင်းရန်မအောင်မြင်သော်လည်း သူ၏ဖက်ရှင်တံဆိပ်ကို ရောင်းရန်တင်ခဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးသည်သူ၏စိတ်အားထက်သန်သောရည်မှန်းချက်နှင့်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူပြသခဲ့သည့်ရဲရင့်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူကြသည်ဟု သူ၏မိသားစုက ပြောကြားခဲ့သည်။
Tags: Celebrity International News